Uyisebenzisa njani ukuCola okuKhethekileyo kwi-Excel 2010
IMicrosoft Excel 2010 ngesiqhelo ikopa lonke ulwazi kuluhlu lweeseli ozikhethayo xa uncamathisela idatha. Sebenzisa i-Excel Cola umyalelo okhethekileyo ukucacisa ezinye iindlela, njengokuncamathisela kuphela imixholo yeseli (ngaphandle kokufomatha) okanye ukufomatha kuphela (ngaphandle kwemixholo yeseli).
Ukuncamathisela iindawo ezithile ezikhethiweyo kwiseli, cofa Cola iqhosha leqhosha kwithebhu yasekhaya yeRibhon. Emva koko, cofa Cola uKhethekileyo kwimenyu yokuhla phantsi ukuvula i Cola ibhokisi yencoko yababini.
Ncamathelisa kuphela ezinye zeepropathi ezikotshiweyo okanye ezisikiweyo zePaste Special.
Ungachaza ukuba ngawaphi amacandelo okhetho lwangoku lweeseli oza kuzisebenzisa ngokukhetha Cola ukhetho olukhethekileyo:
Zonke Ukuncamathisela zonke izinto kukhetho lweseli (iifomula, ukufomatha, uyiqamba igama). Yinto eyenzekayo xa uncamathisela ngesiqhelo.
Iifomula ukuncamathisela konke okubhaliweyo, amanani kunye neefomula kukhetho lweseli langoku ngaphandle kokufomatha.
Imilinganiselo ukuguqula iifomula kukhetho lweseli langoku kumaxabiso abo abaliweyo.
Iifomathi Ukuncamathisela kuphela ukufomatha kukhetho lweseli langoku, ngaphandle kokufakwa kweeseli.
Izimvo Ukuncamathisela kuphela amanqaku owancamathisela kwiiseli zawo (ezifana namanqaku e-self-stick).
Ukuqinisekiswa Ukuncamathisela kuphela imigaqo yokuqinisekiswa kwedatha kuluhlu lweseli olimisileyo ngomyalelo woQinisekiso lweDatha.
Konke ukusebenzisa uMxholo woMthombo Ukuncamathisela lonke ulwazi kunye nezitayile zeseli ezisetyenziswa kwiiseli.
Yonke iMida engaphandle Ukuncamathisela zonke izinto kukhetho lweseli ngaphandle kokukopa nayiphi na imida oyisebenzisayo apho.
Ububanzi bekholamu ukusebenzisa ububanzi beekholamu zeeseli ezikhutshelwe kwibhodi eqhotyoshwayo kwiikholamu apho iiseli zincanyathiselwe khona.
Iifomula kunye neefomathi zamanani ukubandakanya iifomathi zamanani ezinikezelwe kumaxabiso axhonyiweyo kunye neefomula.
Amaxabiso kunye neefomathi zamanani ukuguqula iifomula kumaxabiso abo abaliweyo kwaye kubandakanya iifomathi zamanani owabelwe kuwo onke amaxabiso akhutshelweyo okanye asikiweyo.
Zonke iifomati zoMdibaniso eziDibeneyo Ukuncamathisela ukufomatha kwemiqathango kuluhlu lweseli.
Xa uncamathisela, unokwenza ezinye izibalo ezilula ngokusekwe kwixabiso (kwii) kwiseli (okanye) ezikhethiweyo kunye nexabiso kwiiseli ekujoliswe kuzo:
Nanye: I-Excel ayenzi kusebenza phakathi kokungeniswa kwedatha oyinqumleyo okanye uyikope kwiBhodi eqhotyoshwayo kunye nokufakwa kwedatha kuluhlu lweseli apho uncamathisela khona. Olu luseto olungagqibekanga.
Yongeza: I-Excel yongeza amaxabiso owasikileyo okanye owakopa kwiBhodi eqhotyoshwayo kumaxabiso akwibala leeseli apho uncamathisela khona.
Thabatha: I-Excel isusa amaxabiso owasikileyo okanye owakopishe kwibhodi eqhotyoshwayo kumaxabiso akwibala leeseli apho uncamathisela khona.
Yandisa: I-Excel iphinda-phinda amaxabiso owasikileyo okanye owakopishe kwibhodi eqhotyoshwayo ngamaxabiso akwibala leeseli apho uncamathisela khona.
Yahlula: I-Excel yahlula amaxabiso owasikileyo okanye owakopa kwiBhodi eqhotyoshwayo ngamaxabiso akwibala leeseli apho uncamathisela khona.
Ixabiso le-estrace cream
Okokugqibela, emazantsi e Cola ibhokisi yencoko yababini, unokhetho oluninzi:
Tsiba iindawo ezingenanto: Khetha le bhokisi yokukhangela xa ufuna i-Excel incamathisele kuphela kwiiseli ezingenanto.
Ukutshintsha: Khetha le bhokisi yokukhangela xa ufuna i-Excel ukutshintsha ulungelelwaniso lwangaphakathi olungenisiweyo. Umzekelo, ukuba ukungena kweeseli zoqobo kwehla kwimiqolo yekholamu enye kwiphepha lokusebenzela, amangeniso agqithisiweyo agqithisiweyo aya kudlula kwiikholamu zomqolo omnye.
Cola ikhonkco: Cofa eli qhosha xa ufuna ukuseka ikhonkco phakathi kweekopi ozifakayo kunye nongeniso lwantlandlolo. Ngale ndlela, utshintsho kwiiseli zoqobo ezihlaziya ngokuzenzekelayo kwiikopi ezinamathiselwe.
youtube indlela yokongeza izichazi
iingxaki ngokusetyenziswa kwexesha elide kweflonase
Ndifanele ukuthatha i-lexapro
indlela yokuncancisa ubisi lweebhokhwe
indlela yokwenza iisekethe
yimalini ebay ethatha